ဝက်စတူး နှင့် မုန့်ညှင်း | Wutyee Food House
‘ဘေကွန် ပုဇွန်ကင်’ »
၀က်စတူး နှင့် မုန့်ညှင်း
December 14, 2011 by chowutyee ၀က်စတူး နှင့် မုန့်ညှင်း
၀က်စတူးနှင့် မုန့်ညှင်းဟင်းသည် ချက်ရတာလွယ်ကူပါတယ်။ ၀တ်ရည် အိမ်သားတွေ ကြိုက်နှစ်သက်လို့ အမြဲတမ်းလိုလိုချက်လေ့ရှိပါတယ်။ ၀က်စတူး နဲ့ မုန့်ညှင်းကို အရသာကလည်း ကောင်းမွန်တာမို့ လုပ်စားကြည့်ရအောင်…
၁။ ၀က်သား၃ထပ်သား – ၄၀ကျပ်သား
၃။ ပျားရည် – စားပွဲတင်ဇွန်း ၃ဇွန်း
၄။ ပဲငံပြာရည် အနောက် – စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ဇွန်း
၅။ ရှာလကာရည် – စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း
၆။ နတ်နတ်ပွင့် – ၂ခု
၇။ မှိုခြောက်ပွင့်အမဲ – ၇ခု (အတုံးလေးများ တုံးပေးပါ) (ရေနွေးဖြင့် ပြုတ်ပေးပါ)
၉။ မုန်ညှင်း – ၂စည်း (ရေနွေးဖြင့် ဖျော်ပေးပါ)
၁။ ၀က်သုံးထပ်သား များကို အတုံးကြီးကြီး တုံးပါ။ ၀က်သားကို ဆူးဖြင့်ထိုးပေးပါ။
၂။ ပြီးလျှင် ၀က်သုံးထပ်သားအားလုံးကို ( ဆား(လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်း)၊ ကြက်သားမှုန့် (လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်း)၊ သကြား (လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ဇွန်း)၊ ခရုဆီ၊ ပဲငံပြာရည်အနောက်၊ ပျားရည်၊ ရှာလကာရည်၊ နတ်နတ်ပွင့် ) ထည့်ရောနုယ်ပေးပြီး ၃နာရီခန့် ရေခဲသေတ္တာထဲတွင် နုပ်ထားပေးပါ။
၄။ ပြီးမှ ဒယ်ထဲ ဆီ(စားပွဲတင်ဇွန်း ၃ဇွန်း) ထည့် နုယ်ထားသော ၀က်သုံးထပ်သားကို ထည့်မွှေပေးပါ။
၄။ ဆီပြန်လျှင် ရေကို ၀က်သုံးထပ်သားမြုပ်သည်အထိထည့် မီးပြင်းပြင်းဖြင့်တည်ထားပေးပါ။ ရေခန်းပြီး ဆီပြန်လာလျှင် မှိုခြောက်ပွင့်အမဲများ ထည့်မွှေပေးပါ။ ၃ကြိမ်ခန့် ရေထပ်ထည့်ပြီး တည်ပေးပါ။
၅။ ၀က်သုံးထပ်သားနူးအိလာပြီး ဆီပြန်လာပြီးဆိုလျှင် ဆော့ရည်အနည်းငယ်ချန်၍ မီးပိတ်လိုက်ပါ။
၆။ ၀က်သုံးထပ်သားကို ပါးပါးလှီးပြီး ပန်းကန်ပြားကြီးကြီးပေါ်တွင် စီထည့်လိုက်ပါ။ ပြီးလျှင် မှိုခြောက်များကို အပေါ်မှ စီထည့်ပါ။
၇။ ပြီးလျှင် ဆော့ရည်ကို ပြွက်ပြွက်ဆူအောင်တည်ပြီး ကော်ရည်၁ဇွန်းကိုေ၇ဖြင့်ဖျော်၍ ဒယ်ထဲထည့်ပေးပြီး မွှေပေးပါ။
၈။ ၀က်သုံးထပ်သားထည့်ထားသော ပန်းကန်ပြားထဲသို့ မှိုခြောက်တုံးများထည့်လိုက်ပါ။
၉။ ပြီးနောက် ဆော့ရည်များကို လောင်းချလိုက်ပါ။
၉။ ပြီးလျှင် မုန့်ညှင်းများကို ပန်းကန်ဘေးတွင် စီထားလိုက်ပါ။
၁၀။ စားချင်စဖွယ်ကောင်းပြီး အရသာရှိသော ၀က်စတူး နှင့် မုန့်ညှင်းကို ရရှိပါပြီး။
on January 6, 2010 at 10:08 am | Reply hmone gyi
yummy yummy yummy looking nice too will try it one as it seem easy😉
on July 27, 2011 at 9:25 pm | Reply Cho Wut Hmone
de lote kaung tal pork belly ko bar loe comment ma give kyae bar late
on August 10, 2011 at 8:49 am | Reply chowutyee
on November 16, 2011 at 8:53 pm | Reply Ei Mon
ကြည့်ပြီးသရေတွေကျနေလို့ comment မပေးနိုင်ကြတော့တာထင်တယ်… …….
on November 18, 2011 at 4:19 pm | Reply chowutyee
wut yee ကလည်း ကျေးဇူးပါနော်..🙂
on November 24, 2011 at 11:42 am | Reply pharoanic
ရှာလကာရည် သုံးရင် ချဉ်တဲ့အရသာပါနေမလား
on November 27, 2011 at 2:00 pm | Reply chowutyee
ချဉ်တဲ့အရသာ နည်းနည်းလေးပဲပါတာပါ။ တကယ်အရသာက ချိုပါတယ်။ လိုအပ်လို့ ထည့်ထားတာပါ.. ကျေးဇူးပါ..🙂
on December 16, 2011 at 2:50 pm | Reply မီးလေး
စားချင်စရာကြီးနော် ဗိုက်ဆာနေတာနဲ့ ဟင်းဟင်း
on January 17, 2012 at 2:28 am | Reply serenawilaim
on January 17, 2012 at 10:01 am | Reply chowutyee
၀တ်ရည် ချက်ရင်တော့ မကြော်ဘူး။ ဆား၊ လိုအပ်တာတွေ ထည့်နုယ်ပြီ နုပ်ထားတာက ပိုပြီ အရသာ စိမ့်ပြီ စားကောင်းတယ်.🙂
on March 15, 2012 at 12:21 am | Reply 42
ဆားအချိုးကို တချက်လောက်ပြန်ပြီး confirm လုပ်ပေးပါလား
on March 15, 2012 at 5:46 am | Reply chowutyee
ဆော်ရီးပါနော်.. ပြန်ပြင်ထားပါတယ်.. ပြန်ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါနော်..🙂
on March 15, 2012 at 9:39 pm | Reply usai
Please explain how to make ဆော့ရည် .
on March 17, 2012 at 3:29 am | Reply chowutyee
ဆော့ရည်လုပ်နည်းပါ အပေါ်မှာ ရေးထားပါတယ်နော်..🙂
on August 17, 2014 at 9:15 pm | Reply myo thant
ဒီဟင်းချက်နည်းများထဲက ရှမ်းအစားအစာ များတရုတ်အစားစာများ ကို ကိုယ်တိုင်လေ့လာသင်ယူချင်လို့ပါ wut yee.အဲဒါ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ သိရင်ပြောပေးပါလား